Muraayadaha gidaarka, xal aad u qurxan | Qurxin
Muraayadaha gidaarka, xal aad u qurxan
Maria vazquez | 29/09/2021 10:00 | Dhameystirka
Darbiyadaadu ma madhan yihiin oo ma taqaanid sida loo qurxiyo? Muraayadaha darbiga waa aalad weyn oo tan lagu sameeyo. Ma aha oo kaliya waxay kaa caawin doontaa inay iftiimiso iftiinka, muuqaal ahaan weyneeya oo iftiiminaya qolka, laakiin waxay ku dari doonaan qaab derbiyada waxayna kuu oggolaanayaan inaad xoogga saarto alaabta guriga aad jeceshahay.
Muraayadaha gidaarku waxay lagama maarmaan u yihiin musqusha oo aad bay wax ku ool u yihiin qolka jiifka iyo xitaa hoolka si ay u xirtaan qalabka ama u hagaajiyaan timaheena ka hor intaadan guriga ka tegin. Laakiin, marka lagu daro, waxay yihiin a element qurxinta fantastik ah marka si habboon loo doorto. Waana nooc kasta oo muraayad ah oo aan maanta ka hadlayno inuu gurigaaga siin doono qaab aad u kala duwan.
1 Maxaa derbiyada loogu qurxiyaa muraayadaha?
2 Noocyada muraayadaha derbiga
2.1 Iyada oo leh alwaaxyo alwaax ama bamboo ah
2.2 Wareega, qaabka ugu yar
2.3 Classics ka weyn
2.4 Muraayadaha Venetian
2.5 Dejinta Waxyoonay Retro
Maxaa derbiyada loogu qurxiyaa muraayadaha?
Waxaan leenahay habab badan oo aan u qurxinno darbiyada, haddaba maxaad u dooratay muraayad ama muraayado si aad u samayso? Waxaa jira ujeedooyin wax ku ool ah iyo kuwo la isku qurxiyo labadaba si loogu daro muraayad lagu qurxiyo qol. Oo midna ma aha, laba ma aha, saddexna ma aha ...
Arag ballaarinta meelaha bannaan Ku dhejinta muraayadaha meelaha istiraatiijiga ah ayaa kaa caawin doonta inaad si qoto dheer u siiso meelaha bannaan.
Caawi inaad kordhiso iftiinka dabiiciga ah. Isticmaalka wanaagsan ee iftiinka dabiiciga ah waxay u horseedi kartaa keydin weyn ee biilasha korontada. Intaa waxaa dheer, sare u qaadida iftiinka dabiiciga ah ayaa gacan ka geysan doonta in meelaha gudaha ah ay noqdaan kuwo soo jiidasho leh.
Waxay u oggolaadaan inay ka tarjumaan alaabta guriga iyo faahfaahinta. Miyaad haysataa gabal alaab guri oo aad rabto inaad iftiimiso? Faahfaahinta qurxinta ee aad rabto inaad siiso sumcad weyn? Isticmaal muraayad si aad u suurtogaliso inaad ka aragto dhinacyo kala duwan.
Way wax ku ool yihiin inaad na siiso taabashada ugu dambeysa ka hor intaanan guriga ka bixin. Musqusha, qolka jiifka ama hoolka, muraayadaha ayaa noo ogolaanaya inaan iska sii hormarinno.
Noocyada muraayadaha derbiga
Waxaa jira noocyo badan oo gidaar ah oo suuqa ku yaal xagga qaabka, cabbirka iyo qaabka. Maanta, si kastaba ha ahaatee, waxaan diiradda saarnaa isbeddellada, muraayadaha derbiga moodada ah si loo qurxiyo gudaha gurigeenna, iyadoo loo kaydiyo aag yar oo loogu talagalay fasallada, kuwa aan waligood ka bixin qaab -dhismeedka.
Iyada oo leh alwaaxyo alwaax ama bamboo ah
Qalabyada lagu sameeyay alaabta dabiiciga ah ayaa caan ku noqday guryaheena tobankii sano ee la soo dhaafay. Ma aha wax iska yimid; waa raagayaan iyo ka dhig gurigayaga meel diiran oo soo dhaweyn leh. Waxaan ka hadleynaa alwaax, baasaboor iyo xargaha khudradda sida raffia, rattan ama jute.
Muraayadaha naqshadda casriga ah, khadad nadiif ah, qaabab wareegsan iyo jir alwaax ama baasaboor ayaa ah isbeddelka cusub ee lagu qurxinayo meelaha casriga ah iyo kuwa ugu yar. Waxay sidoo kale si fiican ugu dhex milmeen bay'adaha dabiiciga ah iyo kuwa Waqooyiga, oo la dul saaray laabta khaanadaha, qalabka koonsilka ama miiska labiska.
Si kastaba ha noqotee, haddii waxa aad raadineyso ay tahay qolka siiya jawi bohemian ah, muraayadaha qorraxdu waa dammaanad. Kuwani, oo ay la socdaan kuwa kale oo leh faahfaahinta qashin -qubka, waxay ku habboon yihiin qurxinta derbiyada madhan iyo keenista isku -xirnaanta qol leh roogag jute ah, saxaro alwaax ah ama dambiilo rattan ah.
Wareega, qaabka ugu yar
Muraayadaha wareega ayaa aad loo jecel yahay maanta. Kuwa aan lahayn jir ama leh xirmooyin miyir leh sida kuwa sawirka ayaa had iyo jeer ah xulasho wanaagsan ku qurxin waddooyinka iyo musqulaha dabeecad yar. Waxaa la dul saaray gabal alaab guri ah, waxay istaagaan iyagoo u oggolaanaya in gidaarku neefsado.
Muraayadaha derbiga wareegsan ayaa dhaqan ahaan ku dhejin kara darbiga. Laakiin sidoo kale waxaad ka heli doontaa naqshado taas ka laalaadaan silsilad, xarig, ama suun maqaar ah. Kuwa dambe ayaa si gaar ah xiiso u leh inay qurxiyaan meelaha aad rabto inaad ku muujiso toosan ama kan aad rabto inaad siiso qaab gurracan iyo dib -u -habeyn.
Classics ka weyn
Muraayadaha waaweyn ee dahabka ah waxay awoodaan inay darbi buuxiyaan keligood. Waxay kaloo yihiin kuwo aad waxtar u leh haddii aan rabno inaan u soo jiidanno meel gaar ah, ha noqoto qolka fadhiga, qolka cuntada, qolka jiifka ama musqusha. La xardhay, waxay si gaar ah u xarragoonayaan, oo ku habboon inay daabacaan xeel -dheeraanta deegaanka.
Un qolka fadhiga caadiga ah oo leh saqafka sare, wax nabaro nuurad leh iyo dabka, ayaa ka dhigaysa goob ku habboon in la dhigo muraayadaha noocan ah. Waxa kale oo caadi ah in la helo iyaga oo qurxinaya dariiqyada waaweyn ama marinnada. Badanaa waa la meeleeyaa dusha dabka ama laabta alwaax ee khaanadaha, si fiican u sudhan si fiican ayaa loo taageeray.
Muraayadaha Venetianku waa muraayado leh taariikh dheer. Shirkado kala duwan oo fadhigoodu yahay Murano ayaa sii wada wax -soo -saarka maanta, sidii ay hore u samayn jireen oo kale, muraayadahaani waa kuwo dabeecad u leh lahaanshaha marka lagu daro dayaxa, jir muraayad sidoo kale kaas oo sida caadiga ah lagu qurxiyo astaamaha ubaxa ee xardhan.
Haddii aad rabto inaad ku darto dhaldhalaal iyo taabasho soo jiidasho leh Muraayadaha Venetian -ka ayaa had iyo jeer beddel wanaagsan u ah qol kasta oo guriga ka mid ah. Ku dheji marada qolka hoolka, korka dabka ee qolka fadhiga ama musqusha si aad ugu darto taabashada canabka. U tag hal muraayad oo waaweyn ama samee muraayado yaryar si aad u xoojiso qaabka canabka.
Dejinta Waxyoonay Retro
Qeybaha muraayadaha yaryar oo leh hawo gadaal leh waxay leeyihiin awood qurxin oo weyn. Waad awoodaa iskugu gee cabbirro iyo qaabab kala duwan, halkaasna lagu gaarayo set aad u cajiib ah oo muuqaal ahaan ballaarin doona booska. Ma sahlana, laakiin waxaa ku dhiiri gelin kara sawirada soo socda si aad u ogaato sida loo sameeyo.
Ku isticmaal qolka cuntada oo ay weheliyaan daabacaadda botanical -ka oo kor u qaada hawadooda dambe. Samee gees wanaagsan oo qolka fadhiga ah oo leh kursi -qadiimi ah oo qadiimi ah, miiska dhinac iyo muraayado. Ama ku rid derbiga qolka cuntada ama fadhiga ka sarreeya, si toos ah u raacaya jihada miiska iyo fadhiga.
Ma jeceshahay fikradda ah in derbiyadaada madhan lagu qurxiyo muraayadaha derbiga?
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Qurxinta » Dhameystirka » Muraayadaha gidaarka, xal aad u qurxan
Qaar ka mid ah furayaasha qurxinta qolalka fadhiga
Midabka madow oo ah shey lagu qurxiyo jikada